तुलसीपुरका मेयर पाण्डेलाई वडा नं. ११ का सदस्य सुवाश डिसीको चिठ्ठी - Tulsipur Online
तुलसीपुरका मेयर पाण्डेलाई वडा नं. ११ का सदस्य सुवाश डिसीको चिठ्ठी
Posted by News Desk | ४ बैशाख २०७५, मंगलवार २१:०२ |
सुवास डाँगी, तुलसीपुर,
श्रीमान मेयर साप, नमस्कार ।
नेपालको नमुना तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाट यहाँ जहाँ हुनुहुन्छ मेरो सम्झना छ । पछिल्लो केही दिन यता निरन्तर यहांको कार्यकक्षमा पुग्दा भेट्न नपाएपछि यो चिठिको साहरा लिएको हु ।
ढिलै र टाढा भएपनि तपाईलाई नयां वर्ष २०७५ को शुभकामना । यस नयाँ वर्षले यहाँको मनलाई आफ्नै ठाँउ र कार्य क्षेत्रमा रमाउन सक्ने बनाईदेवस्, मेरो शुभकामना । विशेषत नयाँ वर्षको शुभकामना दिन तपाईको कार्यकक्षमा पुग्दा तपाईलाई देखिन । यता उता वुझ्दा अरु वेलाको जस्तो जवाफ पाए, ‘विदेश भ्रमणमा’ भन्ने । म फर्कदै गर्दा त्यहां मेयर सापलाई शुभकामना दिन आउनेको भिड नै थियो । यहाँसंग पहुँच भएकाले शिधा फोन सम्पर्क गरे होलान्, तर, प्राय म जस्तैहरुको फर्कनुको विकल्प थिएन ।
तपाई मेयर साप बनेको झण्डै १० महिना पुग्यो । यसविचमा झण्डै ५ पटक भेटपनि भयो होला । मेयरमा निर्वाचन लड्दै गर्दा पार्टी भन्दामाथि उठेर राम्रो मान्छे चुन्नु पर्छ भन्नेहरु धेरै देखिन्थे । जो निर्वाचन पछिपनि ठुलै अपेक्षा संगै खुखीको वहार वोकेर हिड्थे । तर,तिनै तपाईका शुभचिन्तकहरु आज निराश छन् । अहिले मन भित्र उनीहरु के कुन्ठा वोकेर हिडिरहेका छन् । यो बुझ्नु भएकै होला छैन भने मैले जानकारी गराए ।
यहाँका शुभचिन्तकहरुमा यति छिटै जुन परिवर्तन देखियो यसले यहाँको आत्मविश्वास र जोशमा कमि आउन नदेवस् मेरो चाहना यत्ति हो । २०७४÷०७५ को १ अर्ब १७ करोडले के÷के परिवर्तन ल्यायो धेरैले भेउ पाउन सकिरहेका छैनौं । झण्डै एक दर्जन नयाँ कार्यक्रमहरु घोषणा त भए तर त्यसको परिणाम भने सुन्न अनि देख्न पाईएको छैन । यहाँको लिस्टमा रहेको १ नम्वरको प्रार्थमिकतामा रहेको स्मार्ट सिटी निर्माणको कुरा कहाँ पुग्यो ? धेरैको उत्सुकता छ । सुन्दै छु,यहांको स्मार्ट सिटी खोई कुन कुन देशबाट आउदैछ रे…? स्मार्ट सिटी वनाउन विदेशमा अनुगमण अध्ययन भ्रमणमा गएको धेरै पटक सुनियो । यहाँ यसअघि नै धेरै बर्ष विदेश बस्दा त्यो देख्नु भएको थिएन र ? चुनाव लड्दै गर्दा यहाँले आफुले देश विदेश भ्रमण गरेको तथा त्यहाँको विकास देखेको खुबै लोभ लाग्दा भाषण सुनाउनु हुन्थ्यो । फेरि किन विदेश हेर्न जानु भएको हो ?
तपाईको स्मार्ट सिटी व्यवहारिक रुपमा यहाँ देख्न पाइएन । उहाँका मुख्य सडकमै सहज रुपमा आवात जावात गर्ने वातावरण पाईन । गाउँ बजार गर्दै गर्दा छतको साहरा लिईरहेका अनि ज्यान जोगाउन ठाँउ÷ठाँउमा झर्ने ति गांउका मलिन अनुहारहरु अनि तपाईको स्मार्ट सिटी सम्झदा आफैलाई उदेक लाग्छ । जहाँ जमिन आस्मानको अन्तर छ । तरपनि जनतामा अझै उत्साह र आशाम भने जीवित नै छ ।
‘क्लिन तुलसीपुर ग्रिन तुलसीपुर अभियान’को हालत पनि उस्तै छ । देखिएको प्रगति सवै भन्दा विपन्नत व्यवसायी, ठेला व्यवसायीहरु विस्थापित भईरहेका छन् । विहान वेलुकी ठेला धकेरेर रोजिरोटी चलाउनेहरुको पेटमा ‘लात’ हान्दै गर्दा उनीहरुको भातको वारेमा कसले सच्ने मेयर साप ? कि नगरपालिका भित्र गरिव व्यवसायीहरुलाई ठांउ छैन भनिदिनु पर्‍यो ? कि त ठाँउ कहाँ हो भनि दिनुपर्‍यो ?
वडामा वितरण गरेर झण्डै अरवको हाराहारीको बजेटले के काम भइरहेको हो ? मेयर साप जनता जान्न चाहन्छन् । मेयर सापको कमाण्डमा हुँदा पनि हाम्रो नमुना तलसीपुर उपमहानगरपालिकाले एउटा डम्पिङ साईट किन फेला पार्न नसकेको हो ? पातु खोला त तपाई भन्दा पहिलेकाहरुले नै भेट्टाएका हुन । र त्यो पातु खोलो लाखौ किसान र गरिवको रोजी रोटीको साहरा हो । तपाँईले त्यहाँ फोहर फाल्दा उनीहरु सशंकित भएका छन् । २ करोड वढीको लगानीमा पातु खोलामा फालिएको फोहोरको खास व्यवस्थापन कहिले हुन्छ ? हजारौं किसानलाई ध्यानमा राखेर कति वजेट छुट्याउने योजना छ ? कि करको भारी अझै बढाउने हो ? सुन्दा सामान्य लाग्ने तर यि गम्भीर प्रश्न गरिरहेका छन् पातु खोला देखि दक्षिणमा कृषकहरु ।
हिजो कर्मचारीहरुको नेतृत्व थियो र आज जनप्रतिनिधिहरुको नेतृत्व छ । जनताले त्यो भन्दा खासै भिन्नता देख्न र भोग्न पाएका छैनन् । हालसम्म तपाईका जुनतारा झारीदिने कुरा व्यवहारमा कहिले देखिने हो ?
दोब्वरले कर बृद्धि गर्नुको कारण सायद उनीहरुमा सेवा दिनका लागि नै हुनुपर्छ । कि जनताको करले तपाँईहरुको मात्रै विकास हुने हो ? कर तिर्न जाँदा सर्वसाधारणहरु झस्किने अवस्था छ । हावा हुरी र पानी पर्दा तपाँईको स्मार्ट सिटीका जनता वेचन बन्छन् । एक वर्ष अघि वर्षात अनि हावाहुरीले क्षेत विक्षत वनाएका घरमा भस्झिदै सुत्नेहरुको आकासमा कालो वादल मडारिने वित्तकै देख्ने वित्तिकै सातो पुत्लो उड्छ । मेयर साप उनीहरुलाई दिनमा ढुक्कले काम गर्न पाउने अनि रातमा सुत्न पाउने व्यवस्था कहिले ल्याउन सक्नु हुन्छ ? कि त्योपनि हेर्न विदेश नै जानुपर्ने हो ?
मेयर साप त देश विदेशमा लामै अनुभव गरेको ‘भिजनरी म्यान’ । तपाई निर्वाचनका क्रममा भनेको यही हो । मेयर साप अव हतार भईसक्यो त्यो तपाईको भिजन छिटै वाहिर आवस् । यदी आईसकेको हो भने विदेशका सिटी अवलोकन गर्नुको साटो यहांका विज्ञ ईञ्जिनियर अनि प्राविधिकहरुसंग भिजन माग्नुहोस् । त्यसले नै हाम्रो तुलसीपुरलाई राम्रो अनि हाम्रो भन्ने गर्ब गर्न लायक वनाउने छ ।
अन्त्येमा तपाँईलाई भविस्यमा जनताको साथमै र आफ्नै कार्यक्षेत्रमा बढी देख्न पाउने आशा छ । त्यसो भएमा मात्रै तपाँईका मतदाताहरुले सजिलो अनुभुति गर्नेछन् । किनकि ‘कुराले च्यूरा भिज्दैन’ भन्ने कुरा झुक्त भोगी जनता राम्रो संग जान्दछन् । त्यसैले जनताले हिजो तपाँईहरुले देखाए जस्ता ठूला सपनाहरु देख्न छाडिसकेका छन् । उनीहरुका न्यूनतम् विपनाका मागहरु पुरा यहाँ लाग्न सक्नु भएछ भने मात्रै पनि यहाँको कार्यकाल सफल हुनेछ ।
स्मार्टको कुरा अलि पछि गरौंला । २३ :२४ वर्षमा उपमेयर वनेको व्यक्ति तपाईसंग अनुभवको कमि छ भन्ने कसैलाई विश्वास लाग्दैन । तर हिजो उपमेयर हुँदा जसरी वित्यो अव वांकी ४ वर्ष त्यसरी नवितोस् भन्ने दृष्टिकोणले तपाँईको यो कार्यकाल सफल भएको देख्न चाहान्छन् जनता । तपाँईका वरिपरी फन्को लगाउने चाकडी बाजहरुको चंगुलमा पर्नु भयो भने तपाँई निकम्मा सावित हुने खतरा छ ।
त्यसैले तपाँईको कार्यकालमा केही न केही परिवर्तन देख्न चाहान्छन् जनता ।कम्तिमा ३ पटक भेट्न जादा एक पटक भेट्न पाउने शौभाग्य प्राप्त होस् । मेयर साप, विदेश भ्रमणमा भन्ने ‘रेडिमेड जवाफ’ कर्मचारीहरुवाट सुन्नु नपरोस् । कम्तिमा आज भोलि मेयरसाप यहि हुनुहुन्छ भनेर गाउँ घरबाट भेट्न आएका शुभचिन्तक अनि पिडा वोकेर आएका पिडितहरु छाति चौडा वनाएर तपाईको कार्यकक्षमा ईन्ट्री गर्न सक्ने वातावरण वनोस् । वडा सदस्य वनेर नगर सभामा वस्दाको यहांको व्यवहार वाहिर पनि देख्न पाईयोस् । पार्टी भन्दा माथि उठ्न सक्नुहोस् । पार्टी प्रतिनिधि होईन,जनप्रतिनिधिको नेतृत्वकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नसक्नुहोस् । अनि तपाई संगै हाम्रो नगरको स्वास्थ्य सुश्वास्थ्य र सम्वृद्धिको कामना गर्दछु । तपाँईको टिमलाई कर्मचारीहरुले ‘एनी हाउ पैंंशा कमाउ’को टिम भन्ने दोषारोपन गर्न नपाउन ।
फेरिपनि मेयर सापलाई दोहर्याएर नयाँ वर्ष २०७५ को शुभकामना व्यक्त गर्दछु । धन्यवाद ।
सुवास डाँगी, वडा सदस्य वडा नं. ११ तुलसीपुर ।
Previousतुलसीपुर मालपोतमा ९ महिनामा १३ करोड राजश्व संकलन
Nextआफ्नो नर्वाचन क्षेत्र नमुना बनाउने चौधरीको प्रतिवद्धता